သင်၏ Instagram ပရိုဖိုင်ပုံပိုကြီးပုံကိုကြည့်နည်း မိုဘိုင်းဖိုရမ်
အကြီးဆုံး Instagram ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲ
Ignacio Sala | 28/09/2021 22:00 | Instagram ကို, social networking
Instagram သည်နှစ်များတစ်လျှောက်လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့သည် Instagram ဇာတ်လမ်းများမှတဆင့်ဗွီဒီယိုများကိုရှာနိုင်သော်လည်း၊ အဓိကအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောဓာတ်ပုံများကိုဝေမျှရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤပလက်ဖောင်းကိုသူတို့၏အဓိကဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများအဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့သောအသုံးပြုသူများ များသောအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ profile picture ကိုအထူးဂရုပြုကြတယ်။
သငျသညျလိုလျှင် ပိုကြီးတဲ့ Instagram ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပါဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွင်လုံးဝအခမဲ့ install လုပ်နိုင်သော web စာမျက်နှာများ (သို့) အပလီကေးရှင်းများ သုံး၍ ၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်ဖြစ်နိုင်သောနည်းလမ်းအားလုံးကိုသင်ပြလိမ့်မည်။
1 Instagram တွင် profile ဓာတ်ပုံထည့်နည်း
2 မင်းရဲ့ Instagram profile ဓာတ်ပုံကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
3 အကြီးဆုံး Instagram ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲ
3.2 IGDownloader ပါ
3.5 InsFull - ကြီးမားသောပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံ
Instagram တွင် profile ဓာတ်ပုံထည့်နည်း
အင်စတာဂရမ်ကငါတို့ရဲ့အဓိကလူမှုကွန်ယက်ဖြစ်လာခဲ့ရင်ငါတို့လုပ်ရမယ် ပရိုဖိုင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောပုံများကိုအထူးအာရုံစိုက်ပါမရ။ ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံအဖြစ်သုံးလိုသောပုံကိုရွေးပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းစက်တွင် Instagram အပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်ပြီးအောက်ပါအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့လျှောက်လွှာကိုဖွင့်လိုက်သည်နှင့်၊ ကိုနှိပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ကိုကိုယ်စားပြုသောသင်္ကေတလျှောက်လွှာ၏အောက်ခြေတွင်ခေါင်းသင်္ကေတဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။
ထိပ်ဆုံးတွင်၊ ပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူအမည်အောက်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ကိုကိုယ်စားပြုသောပုံလွတ်.
ထိုအခါ + sign ကိုနှိပ်ပါ အောက်ခြေတွင်တည်ရှိသည်။ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာ၏ကင်မရာသည်ဖမ်းယူမှုအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လိမ့်မည်။
ငါတို့စက်မှာသိမ်းထားတဲ့ပုံကိုသုံးချင်ရင်ငါတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်ကို ၀ င်ကြည့်ခွင့်ပေးတဲ့မျက်နှာပြင်ရဲ့ဘယ်ဘက်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ icon ကိုနှိပ်ပါ။ ငါတို့လိုချင်တဲ့ပုံကိုရွေး။
မင်းရဲ့ Instagram profile ဓာတ်ပုံကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
အပလီကေးရှင်းကိုဖွင့ ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ကိုကိုယ်စားပြုသောသင်္ကေတကိုခေါင်း၏သင်္ကေတနှင့်ကိုယ်စားပြုပြီးတည်ရှိသည် app ၏ညာဘက်အောက်ခြေ
ထိပ်ဆုံးမှာ၊ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာငါတို့ရဲ့ username အောက်က၊ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောပုံကိုပြထားသည်။
၎င်းကိုပြောင်းရန်အောက်ခြေရှိ + သင်္ကေတကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာ၏ကင်မရာသည်ဖမ်းယူမှုအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လိမ့်မည်။
ငါတို့စက်မှာသိမ်းထားတဲ့ပုံကိုသုံးချင်ရင် screen ရဲ့ဘယ်ဘက်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ icon ကိုနှိပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်တွင်သိမ်းထားသောပုံများကိုသုံးခွင့်ပေးသည်။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အယ်လ်ဘမ်ကို ဖြတ်၍ သွားရမည် ငါတို့သုံးချင်တဲ့တစ်ခုကိုရွေးပါ profile ပုံအသစ်အဖြစ်
Twitter ကဲ့သို့အခြားလူမှုကွန်ရက်များနှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်တို့သည်ပရိုဖိုင်ပုံကိုပိုကြီးသောအရွယ်အစား၌မြင်လိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ရသည် ပုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အလိုအလျောက်အရွယ်အစားအပြည့်ဖြင့်ပြသသည်။
သို့သျောလညျး ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို Instagram မှာမရနိုင်ပါ (ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကိုမကမ်းလှမ်းခြင်းအတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိသောအကြောင်းအရင်းကိုကုမ္ပဏီကထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပေ) ထို့ကြောင့်ပိုကြီးသော Instagram ပရိုဖိုင်ပုံကိုမြင်နိုင်ရန် third-party web page များ (သို့) application များကိုသုံးခိုင်းသည်။
ဒီမှာငါတို့မင်းကိုပြတယ် ပရိုဖိုင်ပုံအရွယ်အစားကိုချဲ့ရန်အကောင်းဆုံးအက်ပ်များနှင့်ဝဘ်စာမျက်နှာများ မည်သည့်အသုံးပြုသူ၏ Instagram မှ
ပထမဆုံးအနေနဲ့၊ ဒီဆောင်းပါးမှာငါတို့သင်ပြထားတဲ့အပလီကေးရှင်းများနှင့် web စာမျက်နှာနှစ်ခုလုံးကိုငါတို့ကိုအကြီးဆုံးပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံကိုသာပြသလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသတိပြုရမယ်။ profile သည်အများမြင်နိုင်သည်မရ။ ပရိုဖိုင်သည်သီးသန့်ဖြစ်လျှင်ဤဖြေရှင်းချက်အားလုံးကိုမေ့နိုင်သည်။
အကောင့်တစ်ခုသီးသန့်ရှိသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံကို ၀ င်ရောက်ချဲ့နိုင်မည့်နည်းလမ်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ပိုကြီးတဲ့ profile picture ကိုကြည့်ပါ Instagram အကောင့်တစ်ခုသည် Save-Insta ဖြစ်သည်။ ဤပလက်ဖောင်းမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Instagram ဓာတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ ရစ်လုံးများနှင့်ပုံပြင်များကိုလည်းကြည့်ရှုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
Instagram ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံကိုပိုမြင်နိုင်ရန် Save-Insta ဖြင့် download ရယူလိုလျှင်အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။ မိုဘိုင်း (သို့) desktop browser မှ
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ ဒီ link ကတဆင့်.
ထိုအခါ account name ကိုရိုက်ထည့်ပါ ပိုကြီးတဲ့ကြည့်ချင်တဲ့ profile photo ဘယ်မှာလဲ။
ငါတို့နာမည်ရေးပြီးတာနဲ့ View ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ.
နောက်ဆုံးတော့ profile ပုံကိုပြလိမ့်မည်၊ပို့စ်များ၊ နောက်လိုက်များနှင့်လူ ဦး ရေနှင့်အကောင့်သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကပုံကို download လုပ်လိုလျှင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ download,.
IGDownloader သည်ကျွန်ုပ်တို့အား v ခွင့်ပြုသည့်အခြားပလက်ဖောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်er နှင့်ပိုကြီးစေရန် profile picture ကို download လုပ်ပါမရ။ IGDownloader ဖြင့် Instagram ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံပိုကြီးရန်ကျွန်ုပ်တို့အောက်ပါသင်ပြသောအဆင့်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။
IGDownloader ကိုရယူပါ အောက်ပါမှတဆင့် link ကို.
ထိုအခါ ငါတို့က user name ကိုရိုက်ထည့်တယ် search box တွင် enter ခေါက်ပါ။
စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာ၊ Instagram အကောင့်၏ profile ဓာတ်ပုံကိုပြလိမ့်မည် ငါတို့မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ အောက်ပါအတွက်ခလုတ်တစ်ခုကိုပြထားသည် ဒေါင်းလုပ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ပစ္စည်းပေါ်မှာ။
သင်သည် Instagram အကောင့်တစ်ခု၏ပရိုဖိုင်ပုံကို download လုပ်ပြီးကြည့်လိုလျှင်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရနိုင်သောအခြားဖြေရှင်းနည်းမှာ Instadp ဖြစ်သည်။ ဤပလက်ဖောင်းသည်လည်းကျွန်ုပ်တို့အားဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည် ဓာတ်ပုံများ၊ ပုံပြင်များ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့် reel များကို Instagram တွင်တင်ခဲ့သည် user account သည် public ဖြစ်နေသရွေ့
Instadp ကိုရယူပါ အောက်ပါမှတဆင့် link ကို.
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိုဖိုင်ဖိုင်တစ်ခုပြလိမ့်မည်။ ပိုကြီးတဲ့ပုံကိုမြင်ရဖို့၊ Full Size ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
စက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပုံကိုနီးပါးပြသလိမ့်မည် မျက်နှာပြင်အပြည့် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်တွင်ပုံကို download လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်သောခလုတ်တစ်ခုနှင့်
ပိုကြီးတဲ့ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး download လုပ်ဖို့ web page တစ်ခုရဲ့အပလီကေးရှင်းကိုသုံးချင်ရင် Big Profile Photo application၊ ငါတို့လုပ်နိုင်တဲ့အပလီကေးရှင်းကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ Play Store မှတဆင့်လုံးဝအခမဲ့ download လုပ်ပါ.
လျှောက်လွှာကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့၊ ငါတို့ကအသုံးပြုသူနာမည်ကိုရေးတယ် ပိုကြီးသောအရွယ်အစား၌ကျွန်ုပ်တို့မြင်လိုသောပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံ၏ညာဘက်ရှိမှန်ဘီလူးကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက်ပရိုဖိုင်ပုံကိုမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးတွင်ပြလိမ့်မည်။ ၎င်းကို download လုပ်ရန်၊ ကိုနှိပ်ပါ အောက်မြှား ငါတို့ကပုံရဲ့အောက်မှာတွေ့တာဘဲ။
ရေးသားသူ: Big Profile Photo & Büyük Profil ဓာတ်ပုံ
InsFull - ကြီးမားသောပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံ
InsFull နှင့်ဤဆောင်းပါး၌ငါပြခဲ့သောအပလီကေးရှင်းများနှင့် web စာမျက်နှာများအားလုံးနှင့်မတူပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ Instagram အကောင့်ကို ၀ င်ရောက်ရန်လိုအပ်သည် လျှောက်လွှာကနေငါတို့ရှာနေတဲ့ပရိုဖိုင်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုရယူနိုင်ဖို့အတွက်
၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Instagram အကောင့်တစ်ခုရှိမှသာအပလီကေးရှင်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏ Instagram account ၏အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းရန်ယုံကြည်လျှင်၎င်းသည်အသုံးဝင်နိုင်သည်။ ငါတို့မှာ Instagram အကောင့်မရှိရင်ဤလျှောက်လွှာသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လုံးဝအသုံးမ ၀ င်ပါ။
ရေးသားသူ: frfan ŞENER
အခြားသူ၏အသုံးပြုသူများ၏ပရိုဖိုင်ပုံကို၎င်းနှင့်ဝေး။ ၎င်းနှင့်ဝေးကွာစေရန်၎င်းအားမျှော်လင့်မထားပါနှင့်။ ဤဆောင်းပါး၌ငါဖော်ပြခဲ့သောပလက်ဖောင်းအားလုံး ကျွန်ုပ်တို့ကိုအမြင့်ဆုံး resolution ၁၅၀ × ၁၅၀ ပစ်ဇယ်ပေးသည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » social networking » Instagram ကို » အကြီးဆုံး Instagram ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲ
အားလုံးတက်ကြွပြီးမွမ်းမံထားသော Rocket League ကုဒ်များ